Sajhasabal.com | Homeनेपाल टेलिकमद्वारा मोबाइलमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेहरुको नाम सार्वजनिक (खर्च विवरण सहित)
कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित
मन्त्रालयका ६ सचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे ?
अख्तियार अगाडि प्रदर्शन गर्ने विवेकशील साझाका कार्यकर्ता पक्राउ
अष्ट्रियाली विदेशमन्त्री नेपाल आउँदै
प्रदेशसभासद्लाई विकासका नायक बन्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
इमान्दार चालक जसले ट्याक्सीमा छुटेका गरगहना फिर्ता गरे
विस्थापितलाई एकीकृत बस्ती
सुर्खेतमा १० ग्राम ब्राउनसुगरसहित छ जना पक्राउ
निर्मला पन्तको डीएनए परीक्षणका लागि अमेरिका पठाइने
सरकारले माग सम्बोधन नगरे फागुन ३० गतेदेखि ग्यास वितरण ठप्प पार्ने उद्योगीको चेतावनी
विदेशबाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको सटही दर (सुचिसहित)
सुनको भाउ ५ वर्ष यताकै महँगो ! आज कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
कोटेश्वर–कलङ्की सडकको बाहिरी लेन निर्माण आधा सम्पन्न
विमानस्थल नजिक ड्रोन उडाउन निषेध
सन् २०१८ मा एचएसबीसीको नाफा २० अर्ब डलर
होन्डाले बेलायतको प्लान्ट बन्द गर्ने, ३५०० रोजगारी जोखिममा
अमेरिकामा गोली हानी तीन बालबालिकासहित चारको हत्या
मानव तस्करीको रुट: नेपाल एयरपोर्टबाट थाइल्याण्ड, कम्बोडिया हुँदै लाओस, यी तस्करबाट बचौं !
युएई सेक्युरिटी गार्डको लागत रु ५ लाख ! लागत सुनेपछि झस्किन्छन् कामदार
जापान पठाउने भन्दै दुई लाख लिएर सम्पर्क बिहिन भयो के गर्ने ?
श्रम कार्यालय ताहाचलमा सक्रिय ५ जना विचौलिया पक्राउ
म्यानपावरका सयौं अवैधानिक दलालहरु ! सचेत नरहे फसिन्छ
नेपाल टेलिकमद्वारा मोबाइलमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेहरुको नाम सार्वजनिक (खर्च विवरण सहित)
Posted on: 05 Feb, 2018
माघ २२, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मोबाइलमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने व्यक्तीको नाम सार्वजनिक गरिदिएको छ । टेलिकमले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार एक वर्षभरीमा नेपाल टेलिकममा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने व्यक्तिमा काठमाडौं, बौद्धका कुलमान घिसिङ रहेका छन् । घिसिङले एक वर्षमा आफ्नो पोष्टपेड मोबाइल नम्बरबाट कुल १ लाख ९७ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ ४० पैसा खर्च गरेका छन् ।
नेपाल टेलिकमको चौधौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सबैभन्दा धेरै मोबाइल प्रयोग गर्ने आफ्ना ग्राहकलाई सम्मान गर्न उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । टेलिकमको आफ्नो वार्षिकउत्सवको अवसरमा ग्राहकको प्रतिनिधित्व हुने गरी मोवाइल तथा अन्य सेवामा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेहरुलाई सम्मान समेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, संस्थागत रुपमा पोष्टपेड मोबाइलबाट सर्वाधिक खर्च गर्नेमा सूर्य नेपाल प्राली रहेको छ । उसले एक वर्षमा ९ लाख ४६ हजार १ सय ८० रुपैया ६० पैसा खर्च गरेको छ ।
यस्तै नेपाल टेलिकमको प्रिपेड मोबाइलबाट सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा काठमाडौं बानेश्वरका पुष्प दुलालको नाम सार्वजनिक गरेको छ । दुलालले वर्षमा मोबाइलमा ६४ हजार ४ सय ५ रुपैया ७१ पैसा खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै सिडिएमए पोष्टपेडमा व्यक्तीगत रुपमा सबैभन्दा धेरै रिचार्ज गर्नेमा मोरङका दिलबहादुर लावती र संस्थागतमा नवज्योति इम्पेक्स, काठमाडौं रहेको छ । लावतीले ३७ हजार २ सय र नव ज्योतिले १८ हजार ६ सय खर्च गरेका छन् । त्यस्तै सिडिएमए प्रिपेडमा व्यक्तिगत रुपमा सुनसरी, महेन्द्रनगरका विदुर परियारले २ लाख २१ हजार १ सय ६ रुपैया ७० पैसा रहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
त्यस्तै वाइम्याक्समा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पाटन रहेको छ । सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले ८८ हजार रुपैयाँ वार्षिक खर्च गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालत, काठमाडौंले लिज लाइन प्रयोग गर्दै १ करोड ६८ लाख २९ हजार ६ सय ८० रुपैया ९४ पैसा खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै टेलिकमओ पिएसटिएन अर्थात ल्यान्डलाइन टेलिफोनमा धेरै हार्छ गर्नेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परेको छ । जसले ४२ लाख १ हजार २ सय ३४ रुपैया ३१ पैसा खर्च गरेको छ। त्यस्तै व्यक्तीगत रुपमा ल्यान्डलाइन प्रयोग गर्नेमा कंचनपुरका रामप्रसाद राना रहेका छन् । उनले वार्षिक १ लाख २६ हजार ८ सय ६४ रुपैया ५२ पैसा खर्च गरेका छन् ।
गुगलमा ‘ट्वाइलेट पेपर’ सर्च गर्दा पाकिस्तानको झण्डा !
अब नयाँ आइफोनबाट अन्य डिभाइस पनि चार्ज गर्न सकिने
इन्टरनेट फास्ट बनाउन एल्मुनियम फोइलको प्रयोग कति सही ? जान्नुहोस्